अमेरिकाको लागि खतरा : रुस र चीन (किन?) | Ekhabar Nepal
अमेरिकाको लागि खतरा : रुस र चीन (किन?)
विश्व माघ ६ २०७४ ekhabarnepal
अमेरिकी रक्षामन्त्री जेम्स म्याटिसले अमेरिकी सेनाको रणनीतिक परिवर्तनमा जोड दिएका छन् । अमेरिकी सेनाको प्राथमिकता अब चरपन्थीसँग लड्नुको साटो रुस र चीन जस्ता प्रतिस्पर्धीको तुलनामा शक्तिशाली बन्न तर्फ हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका हुन।
रक्षा मन्त्री म्याटिसले अमेरिकाको रक्षा नीतिमा ठूलो परिवर्तनको संकेत गर्दै चरमपन्थी भन्दा रुस र चीन अमेरिकाको सुरक्षाका लागि ठूलो खतरा रहेको बताउनुभएको हो । वासिङ्टनमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै रक्षामन्त्री म्याटिसले रुस अमेरिकाको लोकतन्त्रका लागि खतराको रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएको बताए।अमेरिका अहिले चुप रहेको र बढ्दै गएको चुनौतीको जवाफ अमेरिकाले दिन सुरुगरेमा त्यसको सामना कसैले गर्न नसक्ने उनले चेतावनी पनि दिए। सन् २०१६ मा अमेरिकामा भएको राष्ट्रपति चुनावमा रुसले दखल दिएको आरोप लागेको छ ।
यस विषयमा विशेष कमिटिले अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ । यहि बिचमा म्याटिसले अमेरिकी रक्षा नीतिमा ठूलो परिवर्तनको संकेत गरे । रक्षामन्त्री म्याटिसले सेनाका लागि पर्याप्त बजेट दिनुपर्नेमा जोड दिए। सेनाका लागि केन्द्रीय बजेट कटौती हुन नहुने उनको भनाई छ ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यो वर्षको प्रस्तावित बजेटमा सेनाको बजेट १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने तयारी गरेका छन् । सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा ट्वीन टावरमा आक्रमण भएयता अमेरिकाको ध्यान चरपन्थीमा रहँदै आएको छ । तर म्याटिसको भनाईले अब अमेरिकी रक्षा नीति चरमपन्थीबाट विश्वमा सैन्य रुपले बलियो हुँदै गएका रुस र चीनसहितका देश भन्दा बलियो बन्नेमा हुने देखिएको छ ।